Madaxweyne Biixi oo Baarlamaankiisa u sheegay iney ku daaleyn garwadeynka Turkiga ee wada-hadalada DFS iyo Somaliland – Kalfadhi
Madaxweyne Biixi oo Baarlamaankiisa u sheegay iney ku daaleyn garwadeynka Turkiga ee wada-hadalada DFS iyo Somaliland
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi, ayaa Golaha Wakiillada Somaliland u sheegay iney xukuumaddiisu ku talisay in wada-hadalada ay yeelanayaan Dowladda Federaalka iyo Maamulka Somaliland ay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka. Sababta uu go’aankaas u qaatay ayuu ku micneeyey inuu maamulkiisu ku daalay inuu Turkiga uun arrintaasi garwadeen ka ahaado, taas oo uu sheegay in ay tahay midda uu Turkigu doonayo.
“Waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto midey goobjoog a ahaadaan dhamaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah” ayuu Muuse ku yiri Xildhibaannada Somaliland. Waxa uu sheegay in ay jiraan dowlado kale oo diyaar u ah in ay arrintaas kaalin ka qaataan oo, sida uu sheegay, u soo diray codsigooda. Muuse waxa uu Qaramada Midoobay u soojeediyey in ay ilaaliso xaqa Somaliland ee saamiga ay siiso Soomaaliya.
“Qaramada Midoobay waxaan ugu baaqeynaa iney ilaaliyaan xaqsoorka cadaaladda ee saamiga ay bixiyaan” ayuu Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi, ku yiri qudbaddiisa sanadlaha ahayd ee uu shalay u jeediyey Baarlamaanka Somaliland. Isagoo ka hadlaya dagaalada Puntland iyo maamulkiisa ee gobolka Sool ayuu yiri “Soomaaliya waxaan ugu baaqeynaa iney ka fogaato wixii nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka wax yeelaya”.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi, waxa uu ammaan ku dhoobay xukuumaddiisa, waxa uuna sheegay in ay wax badan kusoo kordhisay Somaliland, sanadkii ay jirtay. Waxaa, isaga oo u jeedinaya qudbad socotay 30 daqiiqo Xildhibaannada Somaliland uu u sheegay in ay xukuumaddiisu kor u qaaday nabadda, garsoorka, maamul wanaagga, ka hor tagga qabyaaladda, shaqa la’aanta, wax soosaarka iyo guud ahaan adeegyada aasaasiga ah sida yegliilidda kaabayaasha dhaqaalaha, biyaha, caafimaadka, waxbarashada iwm.
Golaha deegaanka Gaalkacyo oo doortay duqa maagalada ahna gudoomiyaha golaha